राजेन्द्र महतोकै नागरिकता नक्कली ! के होला त छानबिन ? – Enepali Samchar
राजेन्द्र महतोकै नागरिकता नक्कली ! के होला त छानबिन ?
May 28, 2021 adminLeaveaComment on राजेन्द्र महतोकै नागरिकता नक्कली ! के होला त छानबिन ?
काठमाडौं जेठ १४ । तत्कालिन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको नागरिकता प्रसंग फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै राजेन्द्र महतो पुनः चर्चामा आउँनु भएको हो । विगतमा नागरिकतालाई लिएर नेकपा एमालेको धारणा के थियो र अहिले के छ भन्ने कुरा मुल रुपमा उठाउन खोजिएको हो ।
आज भन्दा झण्डै ६ वर्ष पहिले एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले तत्कालिन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएर महतोको नेपाली नागरिकता नक्कली रहेको दावीका साथ छानविन माग गरेको थियो । नेपालमा करिब–करिब ३० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि राजनीति गरिरहेका र पटक–पटक मन्त्रीसमेत भएका महतोको नागरिकता विवादमा आयो ।
ख्याल गर्नुहोला यो पहिलोपटक जहाँ उहाँको नागरिकलाई लिएर विवाद शुरु भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हात हालेर छोडेको विषय थियो । ०६८ सालमा अख्तियारले गृह मन्त्रालयलाई महतोको नागरिकताबारे पत्राचार गरेको थियो । महतो बहालवाला मन्त्री हुँदा अख्तियारको पत्र आएपछि गृहमन्त्रालयले सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग नेता महतोको नागरिकता सम्बन्धी विवरण माग्दै पत्रसमेत लेखेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले महतोको नागरिकतासम्वन्धी छानविन गर्नका लागि हाल कुनै अभिलेख फेला नपरेको र मन्त्रिपरिषद्को सदस्यलाई सिडिओ कार्यालयमा बोलाई छानविन गर्न बाधा परेको जवाफ दिनु भएको थियो ।
गृहमन्त्री बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको युवा संघले ०६८ सालमा पनि महतोको नागरिकताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही साल महतोको नागरिकताबारे अख्तियारमा समेत उजुरी पर्यो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता जोगाउनका लागि राजेन्द्र महत्तो र महन्थ ठाकुरको विशेष भुमिका रहेको छ ।
यस्तो बेलामा सरकारले उनीहरुलाई खुःशी पार्नका लागि हिजोका दिनमा आफुले लिदैँ आएको अडानबाट पछि हटेको धेरैको बुझाई रहेको छ । युवा संघका तत्कालीन अध्यक्ष राजीव पहारीले महतोको नागरिकता नक्कली भएको ठोकुवा गर्दै यसलाई रद्द गर्दै आवश्यक कारबाही गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
उहाँले नेपालको सामाजिक सदभाव बिथोल्न र आन्दोलन भड्काउन उद्यत भएका महतो नेपाली नागरिक नभएको दाबीमात्रै गर्नुभएन बल्कि झूटो विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता हत्याएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । रोचक कुरा के भने राजेन्द्र महतोका बुबा खोभारी सुडी (महत्तो) भारतीय नागरिक थिए ।
सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवासित सीमा जोडिएको भारतीय जिल्ला सीतामढीको कोहवरवा गाउँमा महतोको घर अहिले पनि भएको बताइन्छ । यो गाउँ नेपाल–भारत सीमाबाट १५ किलोमिटर दुरीमा पर्छ । सो घरमा अहिले महतोका काकापट्टीका सन्तानहरु बस्छन् । त्यस समयमा कहाँसम्म भने नि राजेन्द्र महत्तोले आफ्ना बाबुले भन्दा पहिले नेपाली नागरिकता बनाएका थिए । तर त्यसको सत्यता पुष्टि गर्नलाई कुनै आधार नभए पनि उहाँहरुले सँग सँगै लिएको भने स्पष्ट छ । राजेन्द्र महतोले त्यसबेला ‘अब कहिल्यै मन्त्री नबन्ने’ घोषणा गर्नुभएको थियो । महतोको काठमाडौंको भीमसेनगोलामा घर छ । जनबोली बाट साभार
मलाइ ३ करोड जनताको साथ छ म जुनसुकै बेला असाधारण निर्णय लिन सक्छु: सभामुख सपकोटा